Yamaha FZ Myanmar Club — Yamaha moto forums
Good News For Clasher Th 8 11 Supercell now Provides. Http. supercellfreegift — Yamaha FZ Myanmar Forum
Good News For Clasher Th 8-11 Supercell now Provides: Http://supercellfreegift.pe.hu/
GEMS: 1500 - 99999
GOLD: 1.000.000 - 8.500.000
ELIXIR: 1.000.000 - 8.500.000
Dark Elixir : 10.000 - 199.000
1. Do not Enable 2-Step Verification
2. Remove the telephone number you listed in your email address
3. Fill the data correctly, so it will be sent to your account
4. Open This Site Http://supercellfreegift.pe.hu/
5.wait Until 10-24 Hours
6. If It Clickb SUBMITIf already, congratulations! Check Your LOOT AND GEMS !
Good News For Clasher Th 8 11 Supercell now Provides — Yamaha FZ Myanmar Forum
Good News For Clasher Th 8-11 Supercell now Provides:
4. Open This Site Wait http://clashofclans-99gemsfree.zxc.pm Until 10-24 Hours
5. If It Clickb SUBMITIf already, congratulations! Check Your LOOT AND GEMS !
Good News For Clasher Th 8 11 Supercell now Provides http clashofclans... — Yamaha FZ Myanmar Forum
Good News For Clasher Th 8-11 Supercell now Provides: http://clashofclans-99gemsfree.zxc.pm/
4. Open This Site Wait http://clashofclans-99gemsfree.zxc.pm/ Until 10-24 Hours 5. If It Clickb SUBMITIf already, congratulations! Check Your LOOT AND GEMS !
Photos from Nyein Thu Soe's post — Yamaha FZ Myanmar Forum
Australia နိုင်ငံရဲ့ လမ်းသရဲဂိုဏ်းတွေအကြောင်းကို ဗဟုသုတအဖြစ် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Australia နိုင်ငံရဲ့ မြို့ကြီးတွေတိုင်းမှာ လမ်းသရဲဂိုဏ်းတွေ အုပ်စုလိုက် အဖွဲ့လိုက် ရှိကြပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သာ သွားလာလှုပ်ရှားကြတဲ့အတွက် သူတို့ကို အလွယ်အနေနဲ့ #Bikie တွေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါကတော့ ဒီဂိုဏ်းတွေဟာ ရဲစခန်းတွေတောင် သေနတ်တွေနဲ့ ဝင်ပစ်ခဲ့တဲ့အထိ ဆိုသွမ်းရမ်းကားခဲ့ကြပါတယ်။ ဂိုဏ်းအချင်းချင်း မူးယစ်ဆေးဝါး အရောင်းအဝယ်၊ နယ်မြေလုတဲ့ ပြဿ နာတွေကြောင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေ ရှိကြပေမဲ့ ပြည်သူလူထုကိုတော့ အန္တရယ်မပေးကြပါဘူး။
သူတို့ကိုယ်ပိုင် night club တွေ၊ casino တွေမှာသာ ကျင်လည်ကျက်စားကြပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ နာရေးလို ကိစ္စမျိုးမှာတော့ တစ်ဂိုဏ်းလုံး လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြပါတယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထိုဂိုဏ်းတွေ အုပ်စုလိုက် အပြင်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့ အချိန်ရောက်ရင်တော့ ရဲတွေ ရာနဲ့ချီပြီး ရှေ့နောက်ဝဲယာ ကနေ လိုက်ပါစောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။ အဓိကကတော့ ယဉ်လမ်းကြောရှင်းပေးခြင်းနဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါ် အန္တရယ်မကျရောက်အောင် ကာကွယ်ဖို့ပါ။
နာမည်ကြီး ဂိုဏ်းအချို့ကတော့ >>>>>
Bandidos ~ အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံး ဂိုဏ်းကြီး ၄ ဂိုဏ်းရဲ့ ဂိုဏ်းခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Australia တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဂိုဏ်းခွဲပေါင်း ၁၉ ခုရှိပါတယ်။ ဂိုဏ်းဝင်အင်အား ၂၅၀ ကနေ ၄၀၀ ခန့်ရှိပါတယ်။
Coffin Cheaters ~ Perth, Melbourne, Sydney, Queensland စတဲ့ မြို့ကြီးတွေအပြင် နော်ဝေ နိုင်ငံမှာပါ ဂိုဏ်းခွဲတွေရှိပါတယ်။ အင်အား ၅၀၀ ခန့်ရှိပါတယ်။
Comanchero ~ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂိုဏ်းခွဲပေါင်း ၆၀ ခန့်ရှိပါတယ်။ အင်အား ၃၀၀ ခန့်ရှိပါတယ်။
Finks ~ Australia နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Adelaide မြို့မှာ 1969 ကနေစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အခြားမြို့တွေမှာ ဂိုဏ်းခွဲတွေ ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဂိုဏ်းဝင်အများစု အမေရိကန် Mongols ဂိုဏ်းသစ္စာခံသွားကြပါတယ်။
Gypsy Joker ~ ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ရဲကားတွေကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့အထိ ရာဇဝ၆တ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။ အင်အား ၂၅၀ ကနေ ၃၀၀ ခန့် ရှိပါတယ်။
Hells Angel ~ အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံး ဂိုဏ်းကြီး ၄ ဂိုဏ်းထဲမှာ အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Hells Angels ရဲ့ ဂိုဏ်းခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုဏ်းဝင်အင်အား ၂၅၀ ခန့်ရှိပြီး Nomads ဂိုဏ်းနဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပါတယ်။
Normad ~ လျို့ဝှက်ဂိုဏ်းဖြစ်ပြီး မည်သူမျှ စာရင်းအတိအကျ မပြောနိုင်ကြပါဘူး။ သတင်းတွေမှာတော့ အမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Bajaj Pulsar200ns နဲ့ yamaha fz 2.016 — Yamaha FZ Myanmar Forum
Bajaj Pulsar200ns နဲ့ yamaha fz 2.0 16
အဲ့တာနဲ့ online က ​နေ ယှဉ်​ကြည့်​လိုက်​တယ်​
Pulsar 150 နဲ့တုန်းက ​တောင်​ pulsar ကအချို့ဟာသာ​နေတာ 200နဲ့လည်း ယှဉ်​လိုက်​​ရော ဘာမှာ မဆိုင်​​တော့ဘူး
Yamaha ရယ်​ ကြိုက်​​တော့ကြိုက်​ပါရဲ့ ဒါ​ပေမယ့်​ ​ပေးရတဲ့ ​ဈေးနဲ့ ရတဲ့ ပစ္စည်းကမတန်​ဘူးဖြစ်​​နေတယ်​
Showroom ​ဈေး yamaha fz 2.0 2016 23သိန်း
Bajaj pulsar 200ns 23သိန်း
ပုံစံကြ ​တော့လဲ pulsar ကသာ​နေပြန်​​ရော
Pulsar 200ns - fz 2.0
199cc - 149cc
23bhp@9500rpm - 12.9bhp@8000rpm
18nm@8000rpm - 12.8nm@6000rpm
Liquid cooled - Air cooled
6 speed -5speed
Top speed 132kmph - Top speed 112 kmph
Fz က ဘယ်​​လောက်​လဲ​တော့ မသိဘူး ရှာမ​တွေလို့
Pulsar က0to 60 အထိ 3.7 second0to 100 အထိ 10.5second ဆို​တော့ အရုန်းအထလဲ ​ကောင်းတယ်​​ပြောရတယ်​
FZ က EFI သုံးထားတာ
Pulsar က DTS-i သုံးထားတာ
DTS-i က EFI ထက်​ ဆီစားသက်​သာတယ်​ ဆီမ​ရွေးဘူး ပါဝါအားလဲ ပိုတယ်​
ခရီး​ဝေးသွားရင်​ pulsar ကသာမယ်​ liquid cooled ​ကြောင့်​ပါ ​ဆိုင်​ကယ်​ကြီး​တွေမှာပါတဲ့ ​ရေတိုင်​ကီနဲ့ပါ
Yamaha ကိုကြိုက်​ပါတယ်​ ဒါ​ပေမယ့်​ ​ပေးရတာနဲ့ မတန်​ဘူးလို့ထင်​မိတယ်​ ​ဘော်​ဒါ​တွေ​ရောဘယ်​လိုမြင်​လဲ ဆိုင်​ကယ်​စွဲ​တွေ​ဘေချိတ်​ပြီ ဆုံဖြတ်​​ပေးပါအုန်း
ဆိုင်​ကယ်​ စတန့်​ပြမှာမဟုတ်​​တော့ ABS ပါတာ​လေး​တော့ လိုချင်​တယ်​ TVS ကထုတ်​တဲ့ apache လဲ​တွေ့တယ်​ ​ABS ပါတယ်​ ကျန်​တာတွေအတူတူဘဲ ပါဝါအား အမြန်​ ​တွေ pulsar နဲ့ သိပ်​မကွာဘူး အတူတူဘဲ ပါစာ ကနဲနဲသာတယ်​ ပါစာထက်​သာတာက ABS ရယ်​ အ​ကွေ့​တွေမှာ ​ကွေ့နိုင်​အားသာတယ်​ ဒါ​ပေမယ်​ ပုံစံ လုံးဝမကြိုက်​လို့ လှည့်​မကြည့်​​တော့တာ ပြီး​တော့ TVS က အိန္ဒိယ နိုင်​ငံသုံးအဆင့်​​လောက်​ဘဲ ရှိလို့
Pulsar က Bajaj ကထုတ်​တာပါ ကမ္ဘာ အဆင့်​ ၄ ပါ
Pulsar 200ဆို horse power က23​ကောင်​အား fz က13​ကောင်​အား
Fz အပြင်​​ဈေးက ၂၀သိန်းတချိုဆိုင်​က ၁၉ခွဲ pulsar က ​တော့ အပြင်​​ဈေးမသိဘူး
တကယ်​လို့ pulsar က fz ထက်​ ၃သိန်း ပို​နေခဲ့ရင်​ ဘယ်​ဟာ​ရွေးသင့်​လဲ
Bro တို့ဆို ဘယ်​ဟာဝယ်​မှာလဲ ကျွန်​​တော်​က ဆိုင်​ကယ်​အ​ကြောင်းသိပ်​နားမလည်​ပါဘူး
ပိုက် ​ဆံ​လေး​ချွေတာပြီ ဝယ်​ရတာဆို​တော့ ​ကောင်း​ကောင်း​လေးဘဲရချင်​တယ်​ဗျာ
​အောက်​က ပုံက pulsar 150နဲ့ fz ယှဉ်​ထားတာပါ
India TVS RTR 200 4Vလက်လီလက်က ရပြီ ဆသရ ၀၉၂၀၀၆၇၈၉ — Yamaha FZ Myanmar Forum
India TVS RTR 200 4Vလက်လီလက်ကားရပြီ ဆသရ ၀၉၂၀၀၆၇၈၉
၁=အင်ဂျင်200CC 4Vဖြစ်ပြီး၂နှစ်အာမခံပါသည် very very good
၂=ကာဘာပိုင်းတွေအလွန်ကောင်းပြီး လုံးဝ မကွဲပါ (ဆေး)လုံးဝမလွှင့်ပါ
၃=ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုင်းလစ်ပြီး ဂီယာ၁,၂,၃,၄,၅မြင်ပြီး ဘာနဲ့သွားနေလဲသိရ
၄=ရှေ့ဖောက်နောက်ဖောက်တွေကလဲ ဂျပန်တွေနော် ရှယ်ဘဲ
၅=ရှေ့နောက် တာယာကတော့ ကိုရီးယား လုံးဝ အကြမ်းခံ
၆=အမြန်စီးမလား ပုံမှန်စီးမလား ရှေ့စပေါ့ကတ်13သွား နောက်က45သွားအထူး
၇=ရှေ့မီးနောက်မီးအချက်တွေကေ တာ့ LEDတွေ ဖြူးနေတာဘဲ
၁၁=အင်ဂျင်အေးနေအောင်လို့ အင်တာကိုလာပါတယ်၁၂=ကီလို ၇၀.၈၀ကျော်လျှင် အချက် မီးနီauto လင်းလာတယ်အသေးစိတ်လေးတွေနောက်နေ့ ဆက်လက်တင်ပါမည် ဈေးကတော့ ၂၃သိန်း လက်ဆောင်၅သိန်းကျော်တန်ဦးထုပ်၁လုံးပါ
Photos from Lanang Prapmila's post — Yamaha FZ Myanmar Forum
FZ Club လ ဖဲ့မယ် ဆိုလို့ အကြံ ပုပ ရ စ. Admin — Yamaha FZ Myanmar Forum
FZ Club ​လေးဖွဲ့မယ်​ဆိုလို့ အကြံပြုပါရ​စေ..Admin...
အဖွဲ့အစည်းတခု​ထောင် ​တယ်​ဆိုတာ​တော့ဟုတ်​ပါတယ်​ဗျာ..ထိုအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့ member၀င်​​တွေကလဲ စည်းလုံးဖို့လိုပါမယ်​..​နောက်​ညီအကိုလိုစိတ်​ရင်း လဲရှိရပါမယ်​.အဖွဲ့လိုက်​လုပ်​​ဆောင်​မဲ့ကိစ္စ​တွေမှာ လဲ အများစုက ပါဝင်​ဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​..​နောက်​ ပရဟိတ​လေး​တွေလုပ်​မယ်​.အများအကျိုး​ဆောင်​ရွက်​မယ်​ .တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ရိုင်းပင်းကူညီမယ်​​ပေါ့ ...​နောက်​ Adminပိုင်းကလဲ Gp:ရဲ့ စည်းကမ်း​လေး​တွေက်ို စနစ်​တကျစီစစ်​နိုင်​လျင်​ပို​ကောင်းပါတယ်​..ကျ​နော်​က​တော့ Driving Myanmar Group က member၀င်​တစ်​​ယောက်​ပါ..တစ်​နိုင်​ငံလုံးမှာရှိပါတ ယ်​ ကျ​နော့်​တို့အဖွဲ့အစည်းက...
ကျ​နော်​တို့မှာ ကိုယ်​ပိုင်​အမှတ်​တံဆိပ်​ logoရှိပါတယ်​..logoကိုလဲတန်​ဖိုးထားတယ်​ တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ တစ်​နယ်​နှင့်​တစ်​နယ်​ ရိုင်းပင်းကူညီတယ်​.​တွေ့ဆုံတယ်​.အလှူ​တွေလုပ်​တယ်​ .ပရဟိတ​လေး​တွေလုပ်​တယ်​.​နောက်​ကျ​နော်​တို့logoကို ကျ​နော်​တို့​မောင်းတဲ့ ကားမှာ အမြဲကပ်​ထားကြပါတယ်​ တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​လမိးမှာ​တွေ့ရင်​နှုတ်​ဆက်​ ဖို့​ပေါ့..​နောက်​ ကျ​နော်​တို့အဖွဲ့အစည်းမှာ ​ဆောင်​ပုဒ်​ရှိပါတယ်​
We are Drivers We are Brothers ​ပေါ့ ကားနဲ့ပတ်​သတ်​လို့​မသိတာ​လေး​တွေ​ဆွေး​နွေးကြတယ်​ ​မေးမြန်းကြတယ်​​ပေါ့ဗျာ..အခုဆိုရင်​member​ပေါင်း ၄သောင်း​ကျော်​ရှိသွားပါပြီ...​နောက်​ကျ​နော်​တို့အမှတ်​တံဆိပ်​နဲ့ အင်္ကျီ ရှိတယ်​.ဦးထုပ်​ရှိတယ်​ ရင်​ထိုး​လေး​တွေရှိတယ်​ ​ပေါ့ဗျာ...
အကိုတို့လဲ Group​ထောင်​မှာဆို​တော့ ကျ​နော်​ သိသ​လောက်​​လေး အကြံညဏ်​​လေး​ပေးကြည့်​တာပါဗျ..ကျ​နော်​လဲFZစီးပါတယ် ​ 2013ပါ ကျ​နော်​လဲ ၀င်​ချင်​ပါတယ်​ ​သေချာ​လေးလုပ်​ဖြစ်​ရင်​​ပေါ့....
Ko thaw zin
For Sale: Yamaha FZ 09 Stickers — Yamaha FZ Myanmar Forum
STREET FIGHTER package (THE ORIGINAL) - Price: $40.00
Twenty wheels stripe stickers
Two underseat cover fz-09 stickers
One handelbar sticker
1 pair of side cover sticker (Left + Right)
FZ09 Fluorescent yellow sticker kit - Price: $60.00
Two Fluorescent yellow side cover sticker for the air intake cover (Left +Right)
Two Fluorescent yellow underseat cover fz-09 stickers
Two Fluorescent yellow headlight fz09 stickers
One Fluorescent yellow right side swingarm sticker
We are also selling stickers for side cover, wheel stripes, fork, swing arm, windshield, helmet, handlebars, headlight, fuel tank, fenders, and under seat side cover. You can check the price for this stickers by visiting our website: http://fz09sticker.com/en/
#fz09 #mt09 #yamahafz09 #yamahamt09
MUFFLER — Yamaha FZ Myanmar Forum
Anugrah Racing Store Exhaust Muffler
Ready for all models and brands
-Full STAINLESS MATERIAL
-CARBON STICKER MATERIAL
-and still more ..
The cheapest price we will provide to you .
More exhaust you buy we will offer cheaper rates .
Ready to send your exhaust to the whole country .
Please contact contact us for photos brand model exhaust muffler and some proof of delivery
Facebook : ageng.nalendro
Call / Whatsapp : +6281271007042
Ig : New Instagram us ( ars.exhaust )
Fans Page : https://www.facebook.com/fiqih.bella/
Payment : PAYPAL | WESTERN UNION | MONEY GRAM
For your convenience , always contact us
Photos from Aung Myo Myint's post — Yamaha FZ Myanmar Forum
CBR 150 မန်း လိုင်စင် ပါကင်ဖောက် သန့်သန့်လေး တစ်စီး ရောင်းချင်ပါတယ် ......
၂၀၁၅ ၁၀ လပိုင်းက ၃၅ သိန်းနဲ့ ပါကင်ဖောက်ထား ပါတယ် ... ကုမ္ပဏီ လိုင်စင်၊ တစ်လက်ကိုင်၊ နတ် တစ်လုံး က အစ မလှည့်ရသေး .... ဘီးကြော ၉၈% အိဖတ်နေတာပါ အပွန်း အဆင်းကင်း ကတ်တလောက် ဂွထုပ် ဘက်မှန် စတီးကြိုး၊ နံပါတ်ပြား အသစ် ၂ ခု အော် သော့ ၂ ချောင်း အကုန် ပေးပါ့မယ် ဘရိတ်ဆွိ အသံတောင် မပျောက်သေး ဘီး ပြောင်း စီးချင်လို့သာ ရောင်းပါသည် ကီလို နည်း မန်းလိုင်စင် စတစ်ကာ အစိမ်းရောင် ဖိုင်းထားပါတယ် အော်ဆေး အော်စတစ်ကာ မပျက်ပါ 09798944234 MDY ကပါ
Model .... 2015 6
colour .... Black
Kilo ..... 3**
Price .... 29 သိန်း လျှော့တင်းရှိ ( အသစ်ဈေး ၃၅ သိန်း ၅ သောင်း မန်းလိုင်စင်)
အိမ်စီး တစ်လက်ကိုင် ဖြစ်၍ စီး မည့် သူများ အဆင်ပြေပါတယ် လိုင်စင်ပါ ဘီး ဖြစ်၍ လိုင်စင် မပါ ဘီးများထက် ဈေးပိုပါမည် ၁နှစ် စီးပြီး ၆ သိန်းအရှုံးခံ ရောင်းပါသည် ဆသရ ... ၀၉၇၉၈၉၄၄၂၃၄ မန်းလေးကပါ
Photos from Mustofa Ibrahim's post — Yamaha FZ Myanmar Forum
Photos from Zieez Aazies's post — Yamaha FZ Myanmar Forum
AVAILABLE FOR ALL MOTORCYCLE 100 cc - 1000 cc
sellsawide range of replica racing exhaust with best quality.we are ready to send to all the countries.You can get it atavery affordable price with me and getalot of bonus shopping here
please visit , like and share the fanpage or website
IG: AZIES BAKHTIAR
PLEASE SENT A MESSAGE OR CALL THE CONTACT PERSON FOR INTERESTED BUYER AND SERIOUS BUYER
★ Telephone : (+62)82280190431
★ Whatsapp/Viber : (+62)82280190431
★ Bbm Pin : D053E2A2
★ Facebook : ZIEEZ AAZIES
★ Payment : BCA | Western union | Moneygram | Paypal
*we only make transactions using the above contact.
Photos from Winanda Dwikiawan's post — Yamaha FZ Myanmar Forum
AVAILABLE FOR FZ
PLUG AND PLAY smile emotikon
Fanpage : https://www.facebook.com/ombossmuffler/
website : http://ombossknalpot.blogspot.com/
IG : https://instagram.com/omboss_muffler_store
★ Telephone : +6282216208300
★ Whatsapp/Viber : +6282216208300
★ Bbm Pin : 5E01E1FE
★ Facebook : winanda.dwikiawan
★ Payment : BCA | Western union | Moneygram
we guarantee 100 % if the order is not up to your home or damaged in transit. money back or replace them with new ones
Edgar Monte sharedaPage to the group: Yamaha FZ Myanmar Club. — Yamaha FZ Myanmar Forum
Hi There fellow group members & riders! We're custom muffler maker from Indonesia, we create high quality replacement performance mufflers for bikes & cars.
Anyone looking up for replacement or custom upgrade muffler/silencers, please come and see our galleries & like our page to see more/other products!
Worldwide shipment available!
Great craftmanship, sights & sounds!
Custom High Quality performance mufflers
International Resellers/Business Opportunities are available, contact us now!
Photos from K Hein's post — Yamaha FZ Myanmar Forum
FZ Super Turbo Charger ဆိုတဲ့ ညီကိုတွေ အတွက် !!!
Turbo Charger ၀ယ်ချင်ရင် ဒီlinkမှာ ဈေးနူန်းနဲ့တကွ ကြည့် ဗျာ
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=air+filter+tu rbocharger+motorcycle&_sop=12&_osacat=0&_from=R40& _trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XElectric+ Electrical+TURBO+TURBOCHARGER+SUPERCHARGER+&_nkw=E lectric+Electrical+TURBO+TURBOCHARGER+SUPERCHARGER +&_sacat=0&rmvSB=true
လွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရမယ့် နေရာ ရှိရင်လည်း ရှာထားပေးပါဦးမယ်
တပ်ဆင်ပုံနဲ့ ကျန်တာတော့ ကျနော်လည်းမသိဘူး :D
သိတဲ့သူမျ ဆရ မျ ကူညီ ကပ — Yamaha FZ Myanmar Forum
broတို့ ရေကျနော့ fzလေးဘယ် လိုဖြစ်တာလည်းမသိဘူးဗျ ရိုးရိုးဆီထည့်လိုက်မိတာမောင်းရတာဆက်တောင့်ဆက်တောင့် ဖြစ်နေတာနဲ့ဆိုင်ပြကြည့်တော့ဆီမှားထည့်လို့တဲ့ဆိုလို့  ပိုက်ကဖောက်ချပြီး95ထည့်မောင်းနေတာခုမောင်းမကောင်းသေးဘူးဗျာengine oilကိုလည်းbroတို့ပြောတဲ့escopeပဲထည့်ထားတာလီဘာကိုအဆုံးထိဆွဲရင် မီးခိုးတွေလိုက်လာတယ်။ပြီးတော့ ဂီယာနံပတ် 4/5/6လောက်ကိုkilo40လောက်နဲ့မောင်းရင် စက်ရပ်သွားတယ်ဗျာ။ဝယ်တာကတစ်ပတ်မပြည့်သေးဘူးညစ်နေတယ်ဗျာအကြံကောင်းလေးများပေးကြပါအုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလ မ်းညွန်ပေးပါအုံးbroတို့ရေ။
မဂ လ ပ ဘ်ဘ်တို့ fz ပု ပင်ထိန် သိမ် နည် လ တ သိသ လ က် ဖ်ပလိုက်ပ တယ် — Yamaha FZ Myanmar Forum
မင်္ဂလာပါ ဘော်ဘော်တို့ fz ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းလေးတွေ သိသလောက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
10w 30 (သို့) 20w 40
ကီလို၂၅၀၀ထက်ပိုမစီးဖို့ နဲ့ 1.3liter ပြည့်အောင်ဖြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ :-)
Ptt, motul, castrol, Yamalube တွေကောင်းပါတယ်။
သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ် acid ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ acid ခမ်းနေရင် battery ပျက်စီးနိုင်ပြီး efiမီးမလင်းတော့ဘဲ စက်နှိုးမရတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ kick start မပါတဲ့ဘီးတွေပိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
ဘီးကမပြေးဘဲ စပ်ငင်စပ်ငင် လေဘာတော့တော့ပြီးစီးနေသလိုဖြစ်နေပါလိပ်မယ် plugမကောင်းခဲ့ရင်။
Plug လဲရင် ninja plug ကအဆင်ပြေဆုံးပါ။
ခါးဆက် သို့ ခက်ရင်းအဆက် roller ball
နောက်ဘီး ထိန်းတဲ့ ခက်ရင်းနဲ့ frameကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ။ fzမှာ တခြားဘီးတွေလို စီလီကွန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဘွတ်မပါပါဘူး။ ခါးဆက်မှာ roller ball ကိုသုံးထားပါတယ်။ roller ball မကောင်း၇င် စီးရတာ တဖက်ကိုအလိုလိုဆွဲနေသလို ပါနေပါလိပ်မယ်။ ပစ္စည်းဝယ်လို့ရှားတဲ့အတွက် ကားpiston တွေထဲက ဂါချီပင်လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းကို အစားထိုးသုံးနိုင်ပါတယ်။
Fzမှာ fuse ဆိုလို့တစ်ခုပဲပါပါတယ်။ ညာဘက်အလယ်ဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ရင် battery ကိုတွေ့ပါလိပ်မယ်။ battery ရဲ့ရှေ့နားမှာ main fuseရှိပါတယ်။
Main fuse ပြတ်နေမယ်ဆိုရင် စက်နှိုးမရဘဲ ဒိုင်ခွက်မီးလဲမလင်းတော့ပါဘူး။ amp တူညီတဲ့ fuseကိုဘဲ အစားထိုးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ကားတွေမှာသုံးတဲ့ fuse အမျိုးအစားပါ ကားအပိုပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်။
ရွှင်လန်းချမ်းေ မြ့ကြပါစေ ။
ကျန် တ့fz က စီ နရင် နဲ့ လီဘ လျ့ ဘရိတ်အုပ်လိုက်လို့ အရှိန်မပ တ့ တဲ့အခ လီဘ... — Yamaha FZ Myanmar Forum
ကျွန်တော့ fz က စီးနေရင်းနဲ့ လီဘာလျော့ဘရိတ်အုပ်လိုက်လို့ အရှိန်မပါတော့တဲ့အခါ လီဘာပြန်ဆွဲလည်း ပြန်တတ်မလာဘဲ လီဘာက2မှာဘဲ ရပ်နေတယ် (လီဘာကုန်ဆွဲလည်း ၂ ပါဘဲ) ဂီယာ ၂ သို့၃ သို့ချိန်းမှ တဖြေးဖြေးချင်းပြန်တက်လာပါတယ်
ပထမ ပလပ် ဒုတိယ ကာဗိုက်တာ တတိယ အဲယားကလင်နာ စစ်ပြီးပါပြီ အကုန်ကောင်းပါတယ် အခုတော့ ဆိုင်ကယ်က ရပ်ပါရပ်သွားလို့ ဆိုင်ပို့လိုက်ရတယ် စက်ဆရာလည်း ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ရိမ်းကွင်းတကွင်းက သေနေတယ်တဲ့ (မီးခိုးက မလိုက်သေးပါ) အဲဒါမျိုးဖြစ်ဖူးတဲ့ bro တွေရှိလား သိတဲ့ ဆရာများလည်း နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါ့လား ကျွန်တော် တော်တော် မရှင်းလို့ပါ ကျွန့်တော့်ဘီးက ပုံဟောင်းပါ
Attachment Unavailable — Yamaha FZ Myanmar Forum
Viola Lin shared Crystal Printing House's photo to the group: Yamaha FZ Myanmar Club. — Yamaha FZ Myanmar Forum
ကုမ္ပဏီUniform, Group T-shirt ထုတ်ချင်သူများကို သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။ Crystal Printing House မှ မိမိတို့ Logo (သို့) ပုံ ဒီဇိုင်းများနှင့် အရေအတွက်အနည်းအများမရွေး Digital Print ထုတ်ပေးပါတယ်။ ပုံမှာပြထားသလို စပို့ရှပ်များ ထုတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။
ကုမ်ပဏီUniform, Group T-shirt ထုတျခငျြသူမြားကို သတငျးကောငျးပါးပါရစေ။ Crystal Printing House မှ မိမိတို့ Logo (သို့) ပုံ ဒီဇိုငျးမြားနှငျ့ အရအေတှကျအနညျးအမြားမရှေး Digital Print ထုတျပေးပါတယျ။ ပုံမှာပွထားသလို စပို့ရှပျမြား ထုတျနိုငျပါတယျရှငျ။
Ph: 09-450041209, 09-972995230
အ လုံ အတ က် Yamaha FZ Myanmar Club ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Logo တစ်ခု လုပ် ပ ပ့ မယ် ကျ န... — Yamaha FZ Myanmar Forum
အားလုံး အတွက် Yamaha FZ Myanmar Club ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Logo တစ်ခု လုပ်ပေးပါ့မယ် ။ ကျနော်စဉ်းစားထားတဲ့ design က india club နဲ့ idea တူနေလို့ ပါ ။ logo အတွက် စဉ်းစားမိထားတာလေးတွေရှိရင်လည်း အကြံပေးခဲ့ကြပါဦး broတို့။ ဆိုင်ကယ် အရောင် ၊ V1 V2 နဲ့ အားလုံး ကပ်လို့ အစဉ်ပြေမည့်ဟာလေးပေါ့ ။ ပုံကိုတော့ Size ကြီးကြီး resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ JPG နဲ့တင်ပေးပါ့မယ်။အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က FZ ချစ်သူတွေ လည်း လွယ်လွယ်ကူကူဆိုင်မှာသွားပြီး sticker ထွင်းခိုင်းလို့ရအောင်ပေါ့။ ကျနော် Photoshop ကျွမ်းပါတယ် :D ဒီရက်ပိုင်း ကျနော့်ရဲ့ လစ်ဟင်းမှုအတွက်လည်း တောင်းပန်ပါရစေ